#Odawaa oo Madaxda Dowlada ku eedeyay in ay dhaqaalihii ka jarteen Maamulka Galmudug | Get Latest News From Horn of Africa |
#Odawaa oo Madaxda Dowlada ku eedeyay in ay dhaqaalihii ka jarteen Maamulka Galmudug
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Odawaa oo maalmahaan booqasho ku maraya deegaano ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa eedeyn kulul u jeediyay Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaan Odawaa ayaa sheegay in muddo todobaad uu ku sugnaa Galmudug, isla markaana uu tagay magaalooyinka Cadaado, Dhuusamareeb, Gaalkacyo iyo deegaano kale, waxaa uu tilmaamay in dadka deegaanka iyo Madaxda uu kala soo hadlay arrimo badan iyo cabasho ay u soo gudbiyeen sida uu yiri.
Xildhibaanka oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay miisaaniyadii loogu talo galay Maamulka Galmudug jaratay,isla markaana mudo wax dhaqaalo ah aan la siin Galmudug.
“Madaxweyne Xaaf waxa uu ii xaqiijiyay in Lixdii bilood ee ugu dambeysay ay dowladda dhexe ka jaratay gebi ahaanba miisaaniyadii ay siin jirtay Galmudug, waxa ayna ku timaaday arrimo siyaasadeed, waana laga haboonyahay in nolosha dadka la siyaaadeeyo” ayuu sheegay Xildhibaan Odowaa.
Sidoo kale waxa uu sheegay Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Odawaa in mashaariic laga fulin lahaa deegaanada Galmudug la hakiyay,waxaana Madaxda Dowladda uu ugu baaqay in xaalada wax ka bedelaan.
Waxa uu intaas raaciyay ” Galmudug waa cunug yar oo soo korayo uma baahna in neefta lagu celiyo”.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha aad loogu hanweynaa, maadaama deegaanka ay matalaan, isla markaana ay aheyd inay dadka dhex fariistaan, isagoo xusay in qof walba uu yeelan karo dano siyaasadeed, balse aan loo baahneyn in la siyaasadeeyo arrimaha horumarinta oo uu xusay inay cid walba ay dan ugu jirto.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay inuu la wadaagi doono wixii uu ku soo arkay deegaanka Xildhibaanada Federaalka iyo senatarada laga soo doorto.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa oo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya mar soo noqday ayaa lagu yaqaanaa in uu yahay xildhibaan aad u dhaliila dowladda dhexe ee Soomaaliya balse markaan waxa uu soo xiganayaa masuuliyiinta Maamulka Galmudug.